Event Calender - Amazing Yangon
Home /Event Calender
drink eat Education entertainment Event fair food Health hotel job fair Music Promotion Training wedding
Enervon-C Zumba Thingyan @ မြို့မကွင်း / မိုင်ဒါကွင်း
Enervon-C Zumba သင်္ကြန်အကြိုပွဲတော်…
ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကို အရောင်တွေ အမြုပ်တွေကြားမှာ Zumba ကရင်းကြိုဆိုကြမယ်ဆိုရင်ရော ?
သင်္ကြန်အရသာကို ကြိုတင်ခံစားနိုင်စေဖို့ အင်နာဗွန်-စီမှ Zumba in Bubbles and Colors သင်္ကြန်အကြိုပွဲတော်ကို ဖန်တီးပေးလိုက်ပါပြီ။
သင်္ကြန်အကြို အလန်းစားရင်ခုန်သံတွေ ပေးစွမ်းမယ့် အနုပညာရှင်တွေကလည်း အများအပြားရှိနေမှာနော်။ နိုင်နိုင်း၊ ဇာဏ်ခီ၊ Tyron Bejay၊ အောင်မြင့်မြတ်၊ ခိုင်သင်းကြည်နှင့် စံထိပ်ထားဦး၊ အေးဝတ်ရည်သောင်း၊ မယ်လိုဒီ၊ အောန်ဆိုင်း၊ မိုးစက်ဝိုင်၊ ဖြိုးဖြိုးအောင်၊ အိမီမီကို တို့နဲ့အတူ Zumba ကရင်း ဂရေဟမ်၊ ဇော်ပိုင်၊ ဟဲလေး၊ Ar-T၊ သားငယ်၊ ဇွဲပြည့်၊ ပန်းရောင်ခြယ်၊ Mary၊ ဘီလီလမင်းအေး တို့ရဲ့ အလန်းစားသံစဉ်တွေလည်း နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် လုံးဝလက်လွှတ်မခံသင့်ဘူးနော်။
• အမေများအဖွဲ့နှင့် မမများအဖွဲ့တို့ရဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ အကအလှများ
• ရေစိုချမ်းအေး အုန်းလက်မဏ္ဍပ်လေး
• ပျိုပျိုမေတို့ဆုံမှတ် သနပ်ခါးမဏ္ဍပ်
စတဲ့ ကြည်နူးပျော်ရွှင် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကလည်း စောင့်ကြိုနေမှာပါ။ အဖွဲ့လိုက်မုန့်လုံးရေပေါ်ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ပြီး ဆုငွေကျပ် ၂ သိန်းကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးအပြင် ပထမဆုံးလာတဲ့ အယောက် ၅၀၀၀ ကို အင်နာဗွန်-စီမှ ရေစိုခံဖုန်းအိတ်၊ လက်ပတ်၊ ဦးထုပ်တွေကို အမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်သွားမှာပါ။
ကဲ… ဒီလို ရင်ခုန်သံတွေ ဗလောင်ဆူနေမယ့်ပွဲကိုတော့ ဧပြီ ၇ ရက်နေ့ (စနေနေ့)၊ နေ့လယ် ၂ နာရီ၊ မိုင်ဒါကွင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်လို့ လာဖြစ်အောင်လာခဲ့ကြနော်။
The RAVE COLOUR & FOAM FESTIVAL @ Golden City Event Park
We have amazing memories of Myanmar.
More info on line-up and ticketsales will come soon! ??
Call us: 09 9600 900 78
Click Going 》》》 Get Update Information
Yangon Zay, Thingyan Edition @ pin The Tea Factory
Apr 8 @ 8:00 am – 7:00 pm
Upscale farmer’s market ဆိုတဲ့အတိုင်း organic သစ်သီးတွေ နှင့် ပန်း တွေ ပါဝင်တဲ့ အပြင် entertainment ရော kids activities တွေ ထည့်သွင်းထားလို့ ခုလာမယ့် April 8th The Tea Factory မှာ ကျင်းပမယ့် Yangon Zay ကို လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်။ #YangonZay
The Yangon Zay returns in its second edition foratraditional and tasteful Thingyan celebration with healthy food, entertainment, and family friendly fun! We will ensure our event is not wasteful, and there will be no use of plastic items for water play, and instead provide fragrant water bowls, and branches for the festivities. We will have our exciting vendors and discoveries to be made, stay tuned to updates!
Pre-Thingyan Party @ M Bar&Kitchen Rooftop
Barrack Water Festival-2018 @ Barrack Water Festival-2018
Apr 13 @ 11:00 am – Apr 15 @ 11:30 am
#Barrack(Barrack Water Festival)
?All Day(Regular) – 45000
?All Day(VIP) – 90000
TMF-Thingayn Music Festival @ pin Thingyan Music Festival - TMF
Apr 13 @ 11:00 am – Apr 15 @ 11:00 am
Hello Myanmar ??
Thingyan is coming soon ???
Are you ready for The 5th Year Celebration with Thingyan Music Festival on 13th-16th April 2018.
This year TMF will be Epic & Exclusive ?
Don’t miss the ultimate water festival experience with us !
? More Artists & Information Announcements Are Coming Soon ?
❗EARLY BIRD Ticket❗
Party Zone – 90000MMK
Madness Zone- 180000MMK
Ticket Hotline: 09-9600 900 78
Click “Going” this Event and Please stay tuned for more excitements to be announced !
Apr 13 @ 2:00 pm – Apr 16 @ 6:00 pm
? Early Bird Ticket Available ?
Brave ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက် Brave Water Festival 2018 ?? ရဲ့ Early Bird Ticket တွေကို နေ့ခင်းဖက်ရော ညဖက်ပါ ၀ယ်လို့ရပီနော်။ ??
?Early Bird GA – 30000 Ks
?Early Bird VIP – 65000 Ks
မှာယူလိုသူများ အ​နေဖြင့်​ ?
စသည်​တို့ကို ဖြည့်​​ပေးပြီး Message Box က​နေ Message ​လေးပို့လိုက်​ရုံဘဲ​နော်​ ??
?09 9600 900 78 (24hours)
?With bus STOP: လမ်းကျယ်ပလာဇာမှတ်တိုင်မှာဆင်းပါ ပြီးရင် ရွေငါးတိုင်းပြည်တိရစ္ဆာန်ရောင်းတယ့်လမ်းကိုဝင်ပြီး တည်တည်ပါပဲ
?90’s BAR YGN
? #GAနှင့်VIP Ticket များကို
#FREE_DELIVERY ဖြင့် အိမ်အရောက်ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ် နော် အချိန်ကုန်သက်သာ ပြီး လူပင်ပန်းစရာမလို ပဲမှာယူလို့ရပြီးနော်?
??ရန်ကုန် – မန္တလေး အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်
Infinity Indoor Music Festival 2018 @ The ONE Entertainment Park
Apr 13 @ 3:00 pm – 8:00 pm
2nd American Trade Show 2018 Yangon @ Tatmadaw Exhibition Center
2nd time in Myanmar
Organized by Myanmar Promotional Services Co., Ltd
We promote business and enhance the mutual economic exchanges.
You may also like the following events from Myanmar Promotional Services Co LTd:
This Friday, 1st June, 09:00 am, 2nd American Trade Show 2018 Yangon in Yangon
This September, 7th September, 09:00 am, 5th Int’l Industrial Technology & Machinery Show 2018 NPT in Naypyitaw
Also check out other Business Events in Yangon, Exhibitions in Yangon.
The Amazing Race in Yangon @ Lotus Language Centre
Jun2@ 7:00 am – 10:00 pm
The Amazing Race (Running Man) is coming to Yangon via Lotus Language Centre on the 2nd of June.
Race around Yangon, complete challenges, gain new experiences & haveabarrel of fun. There will beacash prize for the winning team.
If you’re interested to join, please register your team of2by emailing your interest to [email protected] or by calling Gina on 09402569159
This is an event NOT to be missed. Everything will be recorded and posted on Youtube. Your team will also be featured in the upcoming debut issue of Lotus Magazine.
You don’t have much time! Register before the 25th of May! Registration costs 15,000 per team which will go towards the cash prize and each team will need to bring 10,000 kyats on race day.
Place: Lotus Language Centre – Yangon, 41 Ingapu Street, 1st floor, Sanchaung, Yangon, 11111, Yangon, Burma